Version 0.9.7.2 – Fohy shortcodes
Jolay 29, 2015 amin'ny tolotra Leave a Comment
Ny famotsorana fiaran-dalamby farany dia naka hafainganam-pandeha, Mirehareha isika ka hanolotra vaovao io dikan-.
Io dikan-fanamboarana taratasy fanomezam-pahefana indray ny Google, izany no mitranga satria misy zavatra izay tena tsy afaka mifehy. Fa indray, mety io.
Ny hafa dia misy fiovana ao amin'ny shortcodes fanamboarana, dia afaka mamaky ny taratasy be dia be nohatsaraina eo amin'ny rohy manaraka:
Shortcode fanohanana in Transposh WordPress plugin
Ny tena fiovana dia ahitana ny fanampiny [tpe] shortcode izay nanampy teo an-tampon'ny ny be taona .
Fehezan-dalàna ity no ampiasaina ho an'ny tena enclosing kaody, izay dia tsy ilaina ny manakatona ny tenifototra, izany dia satria ny fampitandremana ao amin'ny WordPress izay mahatonga
ny kaody parsing mba handeha berserk rehefa tena mampifangaro-fonosina sy famaranana shortcodes.
Koa, tsy misy ilaina ny mamaritra ="y" intsony, izany ankehitriny [tpe mylang] dia miasa fotsiny sy Output: mg
Mamporisika anareo izahay mba hanatsarana, sy mankafy io dikan vaovao.
Version 0.9.7.1 – Manana toerana vaovao
Jolay 22, 2015 amin'ny tolotra Leave a Comment
Zavatra voalohany aloha, izahay te-tena hisaotra Christopher avy LPK Studio – http://lpkstudio.com/ fa ny vaovao famolavolana ny namany Sary, io vohikala vaovao farany niakatra ho any amin'izao fotoana izao ny tranonkala vaovao fitsipika ary tokony ho hita amin'ny alalan'ny fitaovana entin-.
Nahafinaritra anay ny miara-miasa amin'ny Christopher momba izany, ary izy tena mahomby, manaiky ka nahafantatra izay nilainay izahay na dia mbola nanontany 🙂
Ny tranonkala vaovao dia miaraka amin'ny famoahana vaovao, na inona na inona lehibe eto fa bibikely vitsivitsy dia nandeha tamin'izay ny Dodo,.
Azonao atao indray ny mampiasa ny + famantarana ao anatin'ny teny
Amin'ny fotoana sasany, lava fehintsoratra Tsy nahazo teny mandeha ho azy ny tsara avy amin'ny Google
Fanesorana teny taloha dia tsy tena miasa amin'ny 0.9.7.0
Ankafizo ny vaovao dikan-, ary ho azo antoka anao izany hanatsarana Full Version, ny maimaim-poana.